POKER TEXAS HOLD 'EM (ရှိုး) ပြိုင်ပွဲ 2020 - ကစားရန်အခမဲ့ - 18.000.000 ချစ်ပ်အနိုင်ရမည် ။
မေးလ် ပွဲစဉ် Sign in
POKER TEXAS HOLD 'EM (ရှိုး) ပြိုင်ပွဲ 2021 - ကစားရန်အခမဲ့ - 18.000.000 ချစ်ပ်အနိုင်ရမည် ။
| ကြည့်ရှု့သူ: 74
Live777.com ရှိ Poker Texas Hold'em (ရှိုး) ပြိုင်ပွဲအတွက်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား ?
Poker ဆိုသည်မှာရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိသော ကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကစားသမားများစွာကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ ဒါကစိတ်နှင့်ဆိုင်သောဂိမ်းတစ်ခုပါ ,
ကံကောင်းခြင်းသည်ဂိမ်းတိုင်းတွင်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း Poker ဂိမ်းများတွင်ဂိမ်းကိုအနိုင်ရရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာမှာ ကျွမ်းကျင်မှုသည်အဓိကဖြစ်သည်။
ပွဲစဉ်၏အချိန်: အပတ်စဉ် ကြာသပတေးနေ့တိုင်း
စည်းကမ်းများ - live777.com (ဝက်ဘ်နှင့်မိုဘိုင်းအပါအဝင်) တွင်ဂိမ်းကစားသည့် ကစားသမားများအားလုံးသည် ။. Poker Texas Hold'em အခန်းတွင် ကစားသမားအများဆုံး ၆ ယောက်ပါဝင်သည်။
ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်အခြေအနေ - အခန်းထဲသို့ ၀င်ရန်ကစားသမားများသည်အနည်းဆုံးချစ်ပ် ၂၀.၀၀၀ လိုအပ်သည်။ အခန်းထဲသို့ဝင်ရောက်သောအခါ ကစားသမားသည်အခမဲ့ကစားနိုင်ပြီး ချစ်ပ်များအားကစားသမားထံမှ နုတ်ယူလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ ။ ပြိုင်ပွဲတွင်ပါဝင်သည့်အခါ ကစားသမားများသည်အခမဲ့ချစ်ပ်များကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အထူး - ပြိုင်ပွဲတွင်ပါ၀င်ရန်အနည်းဆုံး chips ၂၀.၀၀၀ သာလိုအပ်သည်။ အခန်းတစ်ခန်းစီတွင်ကစားသူ ၆ ဦး (အများဆုံး) ရှိလိမ့်မည်။ ကစားသမားများသည်အခန်းတွင် အခမဲ့ကစားခွင့်ရှိသောကြောင့် ကစားသမားများထံမှ Chips များ မနှုတ်ယူပါ ။
ပြိုင်ပွဲအတွင်း Chips များသည်စနစ်မှချစ်ပ်များဖြစ်ပြီးသင့်အတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲအပြီးတွင်၊ ဤ CHIPS များသည် ပြိုင်ပွဲကိုမ၀င်ခင် သင်၏အခြေခံကျသော CHIP တွင်ရေတွက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Round 1: 07h30PM – 08h15PM ပထမအဆင့် Round 1 အပြီးတွင် စနစ်သည် ပွဲ ၃၀ ကျော်ကစားခြင်းနှင့်အတူ ထိပ်ဆုံးကစားသမား အယောက် ၆၀ ကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။
Round 2: 08h30PM – 21h15 round 1 မှ ထိပ်ဆုံး အယောက် ၆၀ ပြီးနောက် system သည် Final သို့ဝင်ရောက်ရန်ပွဲ ၂၅ ခုကျော်ကစားခြင်းနှင့်အတူ ထိပ်ဆုံး ၆ ယောက် ဖြစ်သော ကစားသမားများကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအလှည့် : 09h30PM – 10h00PM နောက်ဆုံးအကြိမ်ပြီးနောက် စနစ်သည်အနှစ်ချုပ်ပြီးရလဒ်ကိုဆုချီးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
Pot စည်းကမ်းများ -
+ ပုံမှန်ဂိမ်းကဲ့သို့ + x200 ကြိမ်
+ အကယ်၍ သင်သည်အခန်း၏လောင်းကြေး အဆ ၁၀၀ ထက်နည်းသော Chips နှင့်အတူ ဂိမ်းကိုဆုံးရှုံးသောအခါ အဆိုပါစနစ်သည် အပြည့်အဝ x200 ပေါင်းထည့်ပါလိမ့်မည် ။
အချိန်ကုန်သွားပြီးသင်၏ကဒ်အလိုအလျောက် ၃ ကြိမ်ချုံ့သည်။ သင့်ကိုအခန်းထဲကနေထုတ်ပစ်မည် ။
အလှည့်တိုင်း၏အဆုံး၌ ကစားသမားများသည်လာမည့်အလှည့်သို့ ၀င်ရောက်ရန်အနည်းဆုံးပွဲများရှိသည် (သို့) ကစားသမားများသည်နှစ်မျိုးလုံးအတူတူပင်ဖြစ်သည့်လုံလောက်သော Chips ရှိသည်။ ADMIN သည် အလှည့်၏ကျန်နေသေးသည့်ချစ်ပ်များပေါ်တွင်မူတည်ပြီး >> ကစားသည့်ပွဲများ >> အနိုင်ရပွဲစဉ်များ ။ ထို့ကြောင့် နောက်အလှည့်တွင်ပါ၀င်ရန် TOP ကစားသမားကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
Top1: 10.000.000 Chips
Top2: 5.000.000 Chips
Top3: 2.000.000 Chips
Top4: 1.000.000 Chips
အထူး - ကစားသမားများသည် Round2တွင်ပါ၀င်သော်လည်း ချစ်ပ် ၂၀၀,၀၀၀ ကိုလက်ခံမည့်သူသည်နောက်ဆုံးသို့တက်ရောက်ရန်အရည်အချင်းမပြည့်မှီပါ ။
မှတ်ချက် : ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်း ADMIN သည်ပြိုင်ပွဲတွင်မည်သည့် လိမ်လည်ကစားခြင်းကိုမဆိုဖယ်ရှားလိမ့်မည်။